गण्डकीले बनायो एकै वर्ष ११५ झोलुंगे पुल, हालसम्म कति बने ? - Arthatantra.com
पोखरा । बागलुङलाई झोलुंगे पुलको जिल्ला भनेर चिनिन्छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङदेखि बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखा जोड्ने ५ सय ६७ मिटर लम्बाइको झोलुंगे पुल दक्षिण एसियामै लामो दावी गरिएको छ ।
आकर्षक डिजाइन र लम्बाईका हिसाबले यहाँका पुलहरूमा प्रतिस्पर्धा छ । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म एक हजार आठ सय ४५ वाट झोलुंगे पुल निर्माण भइकेका छन् । जसमध्ये बागलुङमा सबैभन्दा धेरै चार सय ४८ वटा पुल बनेका छन् ।
म्याग्दीमा दुई सय ४१ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् । लमजुङमा दुई सय आठ, कास्कीमा एक सय ८३, गोरखामा एक सय ६१, स्याङजामा एक सय ५६ पुल बनिसकेका छन् । यस्तै, पर्वतमा एक सय ५०, तनहुँमा एक सय आठ, नवलपर र मुस्ताङमा समान ६५र६५ वटा तथा मनाङमा सबैभन्दा कम ६० वटा पुल निर्माण भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनलयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्र एक सय १५ वटा थप पुल निर्माण भएका छन् । २५ वटा पुलहरू प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनेको छ भने संघ सरकारको बजेटबाट ८८ तथा पालिकाको बजेटबाट दुईवटा पुल बनेको हो ।
वि.सं.२०७८ असोज २८ बिहीवार १५:०८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे दसैं भनेर जथाभावी नखानुस्, फूड पोइजनिङ होला !
पछिल्लाे दक्षिण कोरियाबाट फर्केर माछा पालन